महोत्तरी, साउन ३२ गते ।
नेपाल शिक्षक महासंघ गौशाला नगरकार्य समितीको अध्यक्षमा नकुल उप्रेती चयन भएका छन । शनिवार गौशालास्थित त्रिभुवन माविको प्रागणमा सम्पन्न भएको एक कार्यक्रमकाबीच महासंघको अध्यक्षमा उप्रेतीलाई चयन गरिएको हो ।
कार्यसमितीको सहसचिवमा विनोद महतो र कार्यसमितीको सदस्यहरुमा धर्मेन्द्र कुमार महतो ,सन्जय महतो, नगेन्द्र सिन्ह र रेनु खुलाललाई सिफारिस गरिएको नवकार्यसमितीका अध्यक्ष उप्रेतीले बताए । गत जेठ २४ गते महोत्तरीमा सम्पन्न भएको नेपाल शिक्षक महासंघको निर्वाचनमा नेपाल शिक्षक संघ प्रथम स्थान हासिल गरेको थिए । जसअनुरुप नेपाल शिक्षक संघको भागमा अध्यक्ष र सह सचिवको पद पाएको थियो ।
यसभन्दा अगाडि गत हप्ता नेपाल शिक्षक महासंघको निर्वाचनमा दोस्रो स्थान हासिल गरेको अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले आफना पदाधिकारी चयन गरिसकेका छन । संगठनले उपाध्यक्षमा सुनिता कुमारी, सचिवमा सुमित कुमार साह, सदस्यहरुमा ईन्द्रेश कुमार साह, विश्वनाथ पासवान र रेश्मा कुमारी वलम्पाकीलाई चयन गरेका थिए ।
त्यस्तै निर्वाचनमा तेस्रो स्थान हासिल गरेको मधेशी शिक्षक फोरमले एक दुई दिनमा नै पदाधिकारी चयन गरि पठाउने शिक्षक नेता श्यामबाबु महतोले बताएका छन ।
मुख्य-1 मुख्य-2 राजनीति
प्रदेश २ सरकारले हरित योजना कार्यान्वयन गर्दै , एकैदिन ५० हजार विरुवा रोप्ने
Posted on September 24, 2018 September 24, 2018 Author शैलेन्द्र क्रान्ति
जनकपुरधाम, असोज ८ गते । प्रदेश २ सरकारले आफनो नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको हरित प्रदेश योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको छ । सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले हरित प्रदेश योजनालाई सार्थकता प्रदान गर्न असोज १२ गते एकै दिन प्रदेश भरिमा ५० हजार विरुवा रोप्ने निर्णय गरेको हो । वृक्षारोपण कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत लगायत सबै मन्त्री […]
दुई नम्बरी काम गर्ने ठेकेदार माथि कार्वाही गर्छु : मुख्यमन्त्री राउत
जनकपुरधाम, चैत १० गते । प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले समयमै गुणस्तरीय काम नगर्ने दुई नम्बरी निर्माण व्यवसायीलाई कार्वाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ । प्रदेश नं. २ को निर्माण व्यवसायी महासंघको कार्यालय समुद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले सरकारले निकालेको टेण्डर भन्दा कम रकममा टेण्डर स्विकार गर्ने र समयमै काम नगरी भाग्ने ठेकेदारलाई […]
Posted on August 25, 2019 August 25, 2019 Author टुडे पाटी
टुडेपाटी समाचारदाता- सिरहा,भदौ ८ गते । सिरहामा एक पुरुषको वेवारिसे शव फेला परेको छ । सिरहाको सिरहा नगरपालिका १६ खिरौना चौक स्थित एक पुरुषको शव मृत अवस्थामा भेटिएको सिरहा प्रहरीले जनाएको छ । आईतबार विहान सिरहा नगरपालिका १५ का अन्दाजी वर्ष ४० को सुरेश साफी मृत अवस्थामा फेला परेको सिरहाका प्रहरी नायव उपरीक्षक अपिलराज बोहराले […]